Kulankii musharaxiinta iyo madax goboleedyada oo laba qodob la isku raacay (Aqriso) | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Kulankii musharaxiinta iyo madax goboleedyada oo laba qodob la isku raacay (Aqriso)
Kulankii musharaxiinta iyo madax goboleedyada oo laba qodob la isku raacay (Aqriso)
Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa caawa kulan gaar ah Muqdisho kula yeeshay Golaha Midowga Musharaxiinta oo ka horyimid habraacyadii doorashada ee shalay kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, kulanka ayaa waxaa looga hadlay habraacyadii ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaranka iyo diidmadii Midowga Musharaxiinta ay ku wajaheen, kadib markii ay soo ifbaxday in awooda ugu weyn ee doorashada ay gacanta u gelayso madaxda dowlad goboleedyada.
Sida aan xogta ku heleyno kulankii caawa ayaa ahaa mid adag oo musharaxiintu ay diidmadooda ugu gudbiyeen madaxda dowlad goboleedyada go’aanka ay ka qaateen habraacyada looga heshiiyey doorashada.
Dood dheer kadib, Golaha Midowga Musharaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa Isku raacay:-
1- In qodobada doodda laga keenay ee habraaca doorashada loo xil-saaray guddi soo turxaan bixiya.
2- Inay sii socdaan kulamada looga hadlayo arrintaan, si xal looga gaaro tabashooyinka ay qabaan musharaxiinta diidan habraacyadii awooda doorashada u gacan geliyey madaxda dowlad goboleedyada.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa la sheegay in kulankaan ay dalbadeen, kadib markii golaha Midowga Musharaxiinta ay maanta qoraal ka soo saareen habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashada.
Kulankaas kadib Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa caawa casho sharaf ku casuumay Ra’iisul Wasaare Rooble, madaxd dowlad goboleedyada iyo xubnaha midowga musharaxiinta.
Kulankaan cashada ahaa ee ka dhacay hoyga uu Qoor Qoor ka degan yahay Muqdisho ayaa dhinacyada fursad u siiyay inay isla qaadaa-dhigaan go’aanadii ka soo baxay Shirkii Golaha Wadatashiga oo Musharaxiintu ay qaadaceen.
Previous articleMarxaladaha Uu Maro Xiriirka jaceyl Ee dhabta ah, Inta Badan Marxalada 3-aad Ma Dhaafaan
Next articleDEG DEG: Al-Shabaab oo weerar qarax ku bilowday ku qaaday degaanka Camaara